Shir-weynaha wadatashiga qaran ee hannaanka dib-u-heshiisiinta oo ka furmay gudaha Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaShir-weynaha wadatashiga qaran ee hannaanka dib-u-heshiisiinta oo ka furmay gudaha Muqdisho
June 13, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
(Bidix) Raysulwasaarihii Soomaaliya Cali Maxamed Geedi. (Dhexda) Raysulwasaare ku xigeenka hadda Mahdi Maxamed Guulleed. (Midig) Wasiirka Wasaaradad Arrimaha Gudaha Cabdi Faarax Siciid Juxa [Sawirka: Facebook]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Shir-weynaha wadatashiga qaran ee hannaanka dib-u-heshiisiinta ayaa maanta oo Talaado ah ka furmay gudaha magaalada Muqdisho, shirka oo socon doona sadex beri ayaa waxaa soo qabanqaabiyay Wasaaradad Arrimaha Gudaha, Arrimaha Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta.
Wasiirka Wasaaradad Arrimaha Gudaha Cabdi Faarax Siciid Juxa ayaa sheegay in ujeedada shirka uu yahay sidii loo soo afjari lahaa khilaafyada u dhaxeeya buslahada Soomaaliyeed, oo uu keenay dagaalkii sokeeye.
Shirka ayaa waxaa kasoo qeybgalay marti sharaf ka kala timid dhammaan gobolada dalka.
Tan iyo markii uu xafiiska qabtay bishii Maarso ee sanadkan, Wasiirka Wasaaradad Arrimaha Gudaha Juxa ayaa qabtay howlo muhiim ah.
Puntland iyo Galmudug oo wadahadalo toos ah ka bilaabay gudaha magaalada Gaalkacyo
Raysulwasaaraha Turkiga oo lagu casumay shir-weynaha Soomaalida ee London
London-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha dalka Turkiga Binali Yildirim ayaa lagu casumay in uu ka qeybgalo shir-weynaha Soomaalida ee London oo la qaban doono bisha May 10 ilaa 12-ka, sida ay ku warantay wakaalada wararka dowladda ee [...]